Okufihlakele kokushiwo yizwi Lami yizinhloso Zami eziningi. Kodwa abantu abazi futhi abaqondi lutho kulokhu, bayaqhubeka nokuthola amazwi Ami ngaphandle bese bewalandela bengaphandle, ngaphandle kokuthi bakwazi ukubona inhliziyo Yami noma bazizwele intando Yami esemazwini Ami. Yize noma ngiwenze acaca amazwi Ami, ngabe ukhona owaqondayo? Ngavela eSiyoni ngeza kubantu. Ngenxa yokuthi ngaba nobuntu bomuntu ojwayelekile ngazembathisa ngesikhumba somuntu, ngalokho abantu bazi indlela engibukeka ngayo ngaphandle, kodwa abayazi impilo engaphakathi Kimi, futhi abamboni uNkulunkulu onguMoya, kanti bazi umuntu wenyama kuphela. Kungenzeka yini ukuthi uNkulunkulu uqobo akakufanele ukuzama kwakho ukumazi? Kungenzeka yini ukuthi uNkulunkulu uqobo akakufanele ukuzama kwakho imizamo “yokumjuqula”? Ngiyayenyanya inkohlakalo yabo bonke abantu, kodwa nginobubele kwababuthaka kukho. Ngisasebenza ngendalo endala yabo bonke abantu. Njengomunye wabantu Bami abase-China awuyona ingxenye yohlanga lwesintu? Kubo bonke abantu Bami, naphakathi kwawo wonke amadodana Ami, labo, abaphakathi kwalabo engibakhethile ohlangeni lwesintu, wena useqenjini eliphansi kakhulu. Ngenxa yalokho, ngikuphe amandla amaningi, okungumzamo omukhulu. Ingabe awukayazisi impilo yakho ebusisekile oyithokozelayo namuhla? Ingabe nisaqinisa izinhliziyo zenu ukuze ningihlubuke nilandele okwenu enizenzele kona? Ukube angizange ngiqhubeke ngibe nozwelo nothando kini, uhlanga lwesintu lonke ngabe luthunjwe nguSathane lwashintsha lwaba “yinto ethandekayo emnandi” emlonyeni wakhe. Namhlanje, phakathi kwalo lonke uhlanga lwesintu, labo abazinikela Kimi nabangithanda ngeqiniso bayingcosana impela babalwa ngeminwe yesandla esisodwa kuphela. Kungenzeka yini ukuthi namuhla isihloko esithi [a] “Abantu Bami” sesaphenduka impahla? Ingabe unembeza wenu usuvele wabanda njengeqhwa? Ingabe nikufanele ukuba ngabantu engibafunayo? Uma ngicabanga ngihlehla, ngiphinde ngibheke isikhathi sanamuhla, obani abayanelisile inhliziyo Yami? Obani kini abakhombise ukuzinaka izinhloso zami? Ukube anginigqugquzelanga, ngabe anikaphaphami, kodwa ngabe nisesesimweni okungathi esineqhwa, futhi, ngabe nikwesinye okungathi ningabantu ababanjwe ubuthongo basebusika.
Phakathi kwamagagasi amanzi, abantu babona ulaka Lwami; ekubhaxazeleni kokuguquka kwamafu amnyama, bathuka kubande nasozwanini, bengazi ukuthi babalekelephi, babukeka basaba ukuthi ukuduma kwezulu nemvula kuzobakhukhula. Bese kuthi uma sekudlule isivunguvungu seqhwa esiyaluzayo, bese beyakhululeka bajabule bethokozela ubuhle bendalo abakubonayo. Kodwa, okwamanje, ubani phakathi kwabo owake wabona uthando olungenamkhawulo enginalo ngabantu? Ezinhliziyweni zabo kunomfanekiso Wami kodwa hhayi ubuqu boMoya Wami: Kungenzeka yini ukuthi abantu abangideleli ngokusobala? Uma isiphepho sesidlulile, bonke abantu kuba sengathi bavuselelekile, sengathi emva kokuhlanzwa ezinsizini sebethole ukukhanya nempilo. Kungenzeka na ukuthi awuzange nawe, emva kokubekezelela izehlo engikushaye ngazo, ube nenhlanhla yokufinyelela osukwini lwanamuhla? Kodwa, uma inamuhla selidlulile bese kufika ikusasa, uyokwazi ukugcina ukuhlanzeka okufike emva kokwehla kwemvula enamandla? Uzokwazi ukugcina ukuzinikela okufike emva kokuhlanzwa kwakho? Uzokwazi ukugcina ukulalela kwanamuhla? Uqinisekile ukuthi ukuzinikela kwakho kuyoba ngokugxilile futhi kungashintshi? Ngiqinisekile ukuthi lokhu akuyona into angeke akwazi ukuyenza umuntu? Usuku nosuku ngihlala phakathi kwabantu, ngenze lokho abakwenzayo, ngibe phakathi kohlanga lwesintu, akekho kodwa oke wakuqaphela lokho. Uma bekungekhona ukuholwa uMoya Wami, kulo lonke uhlanga lwesintu, ngubani obengabe esaphila kulesi sikhathi samanje? Kungenzeka yini ukuthi, njengoba ngithi ngiphila futhi ngenza okwenziwa ngabantu, nginehaba mhlawumbe? Kudala, ngathi “Ngadala uhlanga lwesintu, ngaluhola lonke uhlanga lwesintu, ngashaya umthetho kulo lonke uhlanga lwesintu”; ngabe kwakungenjalo? Kungenzeka yini ukuthi ukubona kwenu lezi zibonakaliso akwenele? Amagama athi “umenzi wezinkonzo” kumele ngabe anele ukuthi nenze imizamo yempilo nicacisa. Ngaphandle kokwazi kwangempela, umuntu angeke angazi Mina, angeke akwazi ukungazi ngamaZwi ami. Kodwa namuhla ngizifikele mina uqobo phakathi kwenu: Lokho angeke kwenze ukuthi ningazi Mina? Kungenzeka ukuthi ukuba Kwami nomzimba womuntu akusikho ukusindiswa kini? Uma ngangingehlanga ngeza kubantu ngiYimi, ngabe abantu kade bagcwala yonke indawo ngemicabango okusho ukuthi, sebengabakaSathane, ngoba lokhu enikholelwa kukho yisithombe nje sikaSathane futhi akuhlangani ndawo noNkulunkulu ngoKwakhe. Kungabe lokho akukona ukusindisa Kwami?
Uma uSathane ema phambi Kwami, angisesabi isihluku sakhe, futhi angithuswa yizinto ezesabekayo: Ngivele ngikuzibe. Uma uSathane engilinga, ngiyawabona amaqhinga akhe, okwenza ukuthi abuyele emuva ethelwe yihlazo nokululazeka. Uma uSathane elwa Nami ezama ukuhlwitha abantu Bami engibakhethile, ngenza ngakho konke okusenyameni Yami; futhi enyameni Yami ngiyabeseka ngibeluse abantu Bami ukuze bangawi kalula noma baduke, kanti ngiyabahola indlela yonke. Uma uSathane esenqotshiwe, ngizobe ngidunyisiwe abantu Bami, kanti abantu bami bazoba ofakazi Bami abangangabazeki. Ngakho-ke, ngizothatha isivikelo esisohlelweni lwami lokuphatha ngisibeke phansi unomphelo emgodini ongenamkhawulo. Lolu wuhlelo lwami, lona ngumsebenzi wami. Ezimpilweni zenu, kuzofika usuku enizohlangabezana nalesi simo ngalo: Kungenzeka yini kambe ukuthi nivume ukuba ngabathunjwa bakaSathane, noma nizovumela ukuthathwa Yimi? Yilokhu enikumiselwe, kumele nikucabangisise.
Njengoba abantu belele isihlwathi, kuba ngukuduma kwezulu Lami kuphela okuvusa abantu emaphusheni abo. Uma bevula amehlo abo, abaningi bayalimala emehlweni ngenxa yokukhanya okubenyezelayo nokubandayo, baze baduke nasendleleni yabo, bangazi nokuthi baphuma kuphi nokuthi baya kuphi. Abaningi abantu bashaywa imisebe yokukhanya ehlabayo, ngenxa yalokho bawele enqwabeni ngaphansi kwesiphepho, imizimba yabo imuke namanzi agelezayo, kungasali nomzila. Ekukhanyeni bayakwazi labo abasindile ukubona ubuso Bami kahle, yilapho-ke abayaye bafinyelele khona ekwazini ukuthi ngibukeka kanjani ngaphandle, kufike lapho bengasalokothi bangibuke ngqo ebusweni, besaba kakhulu funa ngibuyise izijeziso neziqalekiso futhi enyameni yabo. Bangaki abantu abakhala bengalawuleki? Bangaki abaphelelwa yithemba? Bangaki abenza imifula ngegazi labo? Bangaki ababa yizidumbu beya ngapha nangapha bengazi lapho beya khona? Bangaki abantu, abathola indawo yabo ekukhanyeni, bese bezizwa beba nenhliziyo ebuhlungu bakhale izinyembezi iminyaka eminingi bengajabulile? Bangaki abantu, abathe uma bengaphansi kokukhanya okushayisa uvalo nokuxhophayo, abavuma ukungcola base benquma ukuziguqula? Bangaki abantu, ngokungaboni, asebelahlekelwe injabulo yokuphila bese ngenxa yalokho bangakunaki ukukhanya, baqhubeke nokungakhuli belinde umhla wokugcina? Bangaki abantu abaphakamisa izivikelo zempilo, bese ngaphansi kokuholwa ukukhanya, balindele ikusasa labo ngokulangazelela? ... Namuhla, ubani phakathi kwabantu ongekho kulesi simo? Ubani ongekho ngaphansi kokukhanya Kwami? Yize unamandla noma ubuthakathaka, ungakugwema kanjani ukuza kokukhanya Kwami?
a. Umbhalo wasekuqaleni awusifaki “isihloko sa-.”
Ababi Kumele Bajeziswe UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke Bantu! Jabulani! Isahluko 5